Yehlabathi womnatha sele elide wangena ebomini bethu, abantu abaninzi funda ukuba abe owenza kwi-ukukhangela ulwazi oluyimfuneko, ukwenza imali, mamela umculo, jonga amaxwebhu, ukufunda iincwadi, njalo-njalo. kutshanje, kwi-Intanethi uqalile ukuba badibane, yenza entsha abahlobo kwaye nkqu kuwa ngothando. Ngoku kukho enkulu inani ezithile zephondo ukuba kunikela-intanethi Dating ngaphandle naziphi na izibophelelo. Very rhoqo abo okuqonda kwi-real budlelwane-kwayo yonke kuxhomekeke yakho mnqweno. Amadoda nabafazi kakhulu lula ukuhlala ekhaya kwaye uzive ukhululekile get acquainted kunye umntu omtsha.Kule meko, kuyenzeka ukuba ngokupheleleyo faka zonke inhibitions kwaye zithungelana nayiphi isihloko, ngenxa nangaliphi na kanye kuyenzeka ukuba yeka ngaphandle na ukuzisola. Abanye kakhulu uxakekile abantu nje akunayo ixesha kuhlangana enyanisweni, ngoko ke olu khetho kakhulu ngendlela efanelekileyo. I-pros kwaye cons ka-intanethi Dating Abanye bacinga ukuba ngu-fun, abanye ingaba ngenene kwi budlelwane nabanye, kwaye ngoko ke yenza okulungileyo usapho. I imiba Dating-intanethi: a Onesiphumo intshayelelo kakhulu lula lokwenene.Unxibelelwano ngomatshini ekhaya kwi-ethambileyo iingubo kwaye akekho mba njani ujonga, kwaye okwenzayo ngalo mzuzu. Ukhetha esabelana ukuba zithungelana kwaye esabelana hayi. Ukuba umntu kunokuba ufuna musa efana ngayo, susa nje oko kuluhlu kwaye ngoko uya uphumelele khange bother kuwe. Kulula ukulibala ukuba zonke modesty kwaye kuqhuba casual incoko kwi ngezixhobo ezahlukeneyo izihloko. Kwi umsebenzi womnatha akukho namnye ubona, kwaye ke ngoko, zonke nokusilela ukuphela kwi wesiqalo. Budlelwane nabanye unako kwakhiwa, chu kwaye ngaphandle umngcipheko. Unxibelelwano sinokukhokelela abanye thabatha zoko.Kuphela trouble ingaba frustration iphumeza ngokukhawuleza, kungenxa yokuba omtsha hobby. Kukho kakhulu olomeleleyo likelihood ukuba ngaba akayi kufumana ukwaliwa xa uzama ukuhlangabezana, kungenxa yokuba kwabanjalo zephondo abantu ezibhaliswe oku imbono. Ebomini ukuba indlela umntu kwi-street kufuneka ube nomdla kakhulu uphawu, andazi indlela ebeya react kuyo. Uyakwazi zithungelana ngaxeshanye kunye eziliqela abantu. Ekuqaleni kwethuba ka-Dating owamkelekileyo kwaye nkqu kuyimfuneko, ukuze ufumanise umgqatswa kuba budlelwane.Girls ngaphandle isigwebo okanye embarrassment unako ukwenza lokuqala shenxisa. Nkqu abahlala e-the st century, abaninzi.
Awukwazi kuba distracted ukusuka iimeko zabo. Onesiphumo iintlanganiso musa kufuneka ukunikezela eyahlukileyo ixesha, kule umhla ungaya ngaphandle iyama emsebenzini okanye xa esenza nezinye izinto. Phambi ukuthelekisa intlanganiso uyakwazi ukufunda kakhulu malunga umntu, ukuphepha frustration kwi-real ihlabathi. Iintlanganiso kuqhubeka kuphela emva lengthy unxibelelwano, evumela ukuba ulungise kakuhle kuba ntlanganiso.familiarity unako kunokwenzeka ukuba umntu othe ubomi babo kwilizwe apho kufuneka zange sele kwaye mhlawumbi zange uza. Ngapha enjalo unxibelelwano uza kakhulu yandisa yakho horizons. Kuba onesiphumo unxibelelwano kunye no-macala: omkhulu ithuba yokufumana ubuxoki ulwazi; kukho abantu abo xa kuqaliswayo nje ufuna ukuba uyonwabele; dependence kwi unxibelelwano kuthungelwano, nokungabikho amava okwenene, unxibelelwano; a onesiphumo umfanekiso kude real; na bona jikeleziso ye-interlocutor. Kutheni uthando okunqanda ngaphandle ngokukhawuleza.Ukuba ubomi kusenokuba elide jonga iqabane lakho, ngoko ke elide ngokwe xesha ukuya kuhlangana kwaye kuphela emva kokuba zonke ezi stages yokucinga a ezinzima budlelwane kuthungelwano, yonke into kwenzeka ngokukhawuleza kakhulu.
Yenza luthando: a Nokungabikho ingqalelo
Xa ubomi azanelanga unxibelelwano kwaye ingqalelo acquaintance kwi umsebenzi womnatha inika malunga nenkqubo yolawulo olumanyanisiweyo imfuza ukuvavanya konke oku ngaphandle ezibalulekileyo yeemvakalelo zakho iindleko. Internet addiction.Ziyaziwa ukuba xa real ubomi ngu-hluke kakhulu ukususela onesiphumo, umzekelo yokulahla yakhe umntu ufuna ixesha elininzi kwi zephondo forgetting ukuba practically itshintshe ubomi bakhe kuba deception. I-wawuphungula ka-ingxowa-entsha abahlobo kunye acquaintances. Kuthungelwano ukuqala incoko kakhulu lula, nje ukufumana efanayo umdla, kwaye unoxanduva phantse”umphefumlo mates”. Ukuba unayo low mna-athathe, kuyenzeka ukuba benyuke nge intsomi kwaye ukuba abe abakhoyo kuphela zabo amaphupha. Kule meko, kulula kakhulu ukwenza lokuqala shenxisa.Umfanekiso kwelinye icala iliso kwi-eyona ndawo ngokulinganayo. ubuqu nge yakho imagination, inyaniso ka-engaziwayo kwaye, ikakhulu, ukuba uhlobo unxibelelwano ayikho ebalulekileyo. Ezinjalo uthando akusebenzi kukhokelela thabatha zoko. Nuances phambi ukuthelekisa intlanganiso ukuze uphephe unpleasant kwiimeko, kufuneka nazi ezinye specifics ye-iintlanganiso emva onesiphumo unxibelelwano: Uloyiko yindlela eqhelekileyo, wonke umntu ufumana koyika ka-disappointments. Ubomi a roulette kwaye kuphela intlanganiso babe chaza ukuba uza kuqhuba a budlelwane okanye hayi. Ilungiselelwe disappointments.Zibuze engundoqo umbuzo, oko ufuna ukususela kweli budlelwane kwaye kwangoko malunga nokuba ukuqhubeka unxibelelwano kunye umntu. Ukuba lowo constantly kuhlanganisa incoko ukusuka isihloko intlanganiso kwi-yokwenene ebomini, ngoko ke lowo ngu-hayi ilungile, okanye hiding into evela kuwe. Musa kuba fooled, hypocrisy zange iya kuba ekuqaleni nomdla bond kwixesha elizayo. Ukuba intlanganiso ayiphumelelanga, musa woyikayo ukwakha omtsha budlelwane, abo sele umngcipheko akusebenzi basele champagne
← Free zinokuphathwa Ngesondo Incoko zama
Ividiyo ukuncokola nge-girls ngaphandle naluphi na ubhaliso okanye imali? - Apho ukwenza aphile ukuncokola nge-girls ngaphandle naluphi na ubhaliso:: Cela Kum Ngokukhawuleza →